Segmantii sarara qonyoowwan qaphxiilee deetaa lamaa (qaphxii dhumaa) fi qaphxiilee too'annoo lama (qabannoo) of keessa qaba. Qaphxii deetaa gara akaakuu garagraatti jijjiruu ykn qaphxiilee to'oonna gara iddowwan adda addaatti harkisuun boca qonyoo jijjiruu dandeessa.
Sarara filachuun fi Dhangii - Sarara filachuun amaloota sararaa fooyeessuu dandeessa.
Qaphxilee deetaa fi qaphiilee too'annoo sarara fi qonyoowwaa ilaaluuf, sarara fili, kana booda sajoo Qaphxiilee kabala Fakkasaa irra jiru cuqaasi. Qaphxilee deetaa yemmuu skuweerdhaan bakka bu'aman qaphxiilee too'annoo ammoo gengoodhaan akka buttamu qaphxii too'annoo qaphxii deetaa irratti dacha'ee taa'u danda'a.
Segmenti sarara qonyoowwaa mijeessuuf:
Sarara qonyoowwaa fili, kana booda sajoo qaphxiilee kabala Fakkasaa irraa cuqaasi.
Hamamtaa sarara deebistee sireessuuf qaphxii deetaa harkiisi. Yoo qaphxiin too'annoo qaphxii deetaa irratti dacha'e hanga qaphxii deetaa argituutti qaphxii to'annoo harkisi, kana booda qaphxii deetaa harkiisi.
Qaphxii too'annoo harkiisi. kallatti qaphxii too'annoo harkifteen qonyoon ni dhiiba.
Sarara Qonyoowwaa adda baasuuf:
Sarara qonyoowwaa qaphxiilee sadii fi sadii ol qaban qofa adda baasuu dandeessa.
Qaphxii deetaa fili, kana booda kabala Qaphxilee Maayyii irraa sajoo Qonyoo Addabaa cuqaasi.
Boca cufamaa Uumuuf:
Kabala Qaphxiilee deetaa Gulaaluu irraa, sajoo Bézier Cufi cuqaasi.
Qaphxiilee deetaa sarara qonyoowwaa irratti jijjiiruuf:
Qaphxii deetaa jijjiiruu barbaadduu cuqaasitii kanneen itti aanan keessaa tokkoo hojjadhu:
Qaphxii deetaa gara qaphxii lalaafaatti jijjiiruuf, sajoo Ce'huumsa Laafaa kabala Qaphxiilee Gulaali irra jirtu cuqaasi.
Qaphxii deetaa gara qaphxii Walfakkiitti jijjiiruuf, sajoo Ce'huumsa Walfakkiitti laafaa kabala Qaphxiilee Gulaali irra jirtu cuqaasi.
Qaphxii deetaa gara qaphxii xiyyootti jijjiiruuf, sajoo Qaphxii xiyyoo kabala Qaphxiilee Gulaali irra jirtu cuqaasi.
Qaphxii deetaa ida'uuf:
Kabala Qaphxiileee Gulaaluu irraa, sajoo Qaphxiilee Saagi cuqaasi.
Iddoo qaphxii dabaluu barbaadduutti sararicha cuqaasitii haanga fageenya xiqqootti harkiisi.
Yoo qaphxii deetaa qaphxii too'annoo qabaachuu baate, qaphxii deetaa fili, kana booda kabala Qaphxiilee Gulaali irraa sajoo Gara Qonyootti Jijjiirii cuqaasi.
Qaphxii deetaa haquuf:
Qaphxii haquu barbaaduu cuqaasi.
Kabala Qaphxiileee Gulaaluu irraa, sajoo Qaphxiilee Haqi cuqaasi.
Gulaaluu Qaphxiilee masakaa
Title is: Qonyoota Gulaaluu